Howlgalo aan caadi ahayn oo laga sameeyay magaalada Gaalkacyo iyo dad 100 qof ka badan oo la qab-qabtay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Howlgalo aan caadi ahayn oo laga sameeyay magaalada Gaalkacyo iyo dad 100 qof ka badan oo la qab-qabtay
Wararka naga soo gaaraya waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamada booliska ee magaaladaasi ay halkaasi ka sameeyeen howlgalo culus oo lagu soo qab-qabtay dad ka badan 100 qof.
Ciidankaasi ayaa howlgalka xoogiisa waxay ka sameeyeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee dhinaca maamulka Puntland, waxayna saraakiisha amniga sheegeen in uljeedka howlgalkaasi uu yahay sidii amni buuxa loo heli lahaa magaaladaas.
Taliye ku-xigeenka qeybta booliska gobolka Mudug C/qaadir Faarax Shire oo la hadlay warbaaahinta ayaa sheegay in dadkaan ay holwglka ku qabteen u badan yihiin dad dhalinyaro ah, islamarkaana looga shakiyay inay qeyb ka yihiin amni daradda ka jirta Gaalkacyo.
Sidoo kale, taliye ku-xigeenka ayaa sheegay in dhamaan dadkaasi la qabtay ay haatan ku xiran yihiin saldhiga booliska islamarkaana lagu sameyn doono baaritaano, wixii dambi lagu waayana lasii deyn doono.
“Dadka howlgalka lagu soo qab-qabtay waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah, waxaana looga shakiyay inay amni darro ka wadeen magaalada Gaalkacyo, waxaana haatan ku socda baaritaano, qofkii dambi lagu helo sharciga ayaa lagu qaadayaa, qofkii dambi lagu waayane waa lasii deynayaa” Sidaas waxaa yiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliska gobolka Mudug C/qaadir Faarax Shire.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo wixii ka dambeeyay markii magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ay gaareen ciidamada DANAB ee sida gaarka ah u tababaran, waxaa guud ahaan magaaladaasi ka bilawday howlgalo ka dhan ah dadka amni daradda ka wada halkaas, iyadoona maalmihii ugu dambeysay howlgalo ay ciidankaasi ka sameeyeen halkaasi lagu soo qab-qabtay dad looga shakiyay inay falal amni darro ah lugta kula jireen.